Imfihlo yethu yokuSebenzisa iiNjini zokuKhangela | Martech Zone
Imfihlo yethu yokuSebenzisa iiNjini zokuKhangela
NgoLwesithathu, Julayi 28, 2010 NgoMgqibelo, Septemba 19, 2015 Douglas Karr
Nanku umzekelo oqhelekileyo wezibalo zokuhlelwa kwamagama aphambili okhuphiswano komnye wabathengi bethu:
Umgca ngamnye umele igama elingundoqo, kwaye i-Y-Axis yindawo yabo njengoko kubhalwe ngu IiLebhu zeGunya. Ngaphantsi kweenyanga ezi-2, kwaye sele siza kubafumana kwiphepha 1. Kwiinyanga ezi-6, siza kuba nenqanaba elikhulu kubo. Ngaphezulu kwabaxumi abangama-20, siyazi ngokupheleleyo into efunekayo ukuze indawo ibekwe kakuhle. Omnye wabathengi bethu abaphambili ngoku ubeke # 1 kwi-3 yamagama aphezulu kukhuphiswano kumzi mveliso wabo, kunye neqela lamanye amagama abakwiphepha 1 kunye nokuphucula.
Indawo ye-SEO ayisiyomfihlo. Nantsi into esiyenzayo:
Qiniseka kubahlalutyi ifakwe ngokufanelekileyo kwaye sifumana ubalo olululo malunga nokuba sisiphi isiseko esisebenza kuso. Siqinisekisa amagama aphambili aqhuba ukugcwala kwabantu ngokwenyani afanelekileyo kwishishini esifuna ukulwenza kwindawo leyo. Sizama nokudibanisa ukuguqulwa kwemilinganiselo… ngamanye amaxesha ukugcwala kwakho akuyonyani ukuqhuba imali kwishishini lakho. Kubalulekile ukwahlula zombini.
Yenza uphando lwamagama aphambili usebenzisa Adwords, Semrush kwaye SpyFu ukufumana ukuqonda kumagama aphambili esikuwo ngoku, esingabekwanga kuwo, kwaye ukhuphiswano lubekwe njani. Oku kuya kubonelela ngemigaqo yokuba sijolise kuyo. Sijolise kwimigaqo esele sinayo inqanaba lokuba siyazi ukuba singatyhalela kwinqanaba eliphezulu… ngethemba # inqanaba.
Qinisekisa indawo ulawulo lwabaphathi kulungiselelwe kwisicwangciso esona kanye kunye negunya esifuna ukuba silifumane. (Umzekelo: iindidi zeemveliso esifuna ukuzibeka kakuhle zinxulunyaniswe nokuhamba kwindawo okanye zikhethwe kunxibelelwano olukhulu kumxholo wephepha lasekhaya). Emva kotshintsho lwe-algorithm yakutshanje kaGoogle, sityhalele abathengi bethu ukuba 'bacofe' phaya iisayithi ukuze zibanzi kunokuba zinzulu. Oko kuthetha ukuba amaphepha asekondari ngakumbi, kodwa ukugcina amaphepha amanqanaba esithathu nangaphaya ubuncinci.
Qiniseka ukuba indawo inefayile ye- iirobhothi ifayile, Sitemaps, kwaye ubhalisiwe kunye Webmaster Ukusuka kwiinjini eziphambili zokukhangela ukuze sikwazi ukujonga indlela injini yokukhangela efumana ngayo kunye nokukhangela umxholo, kunye nokukhomba naziphi na iingxaki.
Qinisekisa ukuba indawo inamaphepha okanye ibhlog inezithuba ezithetha ngqo kwi amagama okanye amagama afanayo (ukuba wenza ukhangelo kwigama elingundoqo, jonga emazantsi ephepha leziphumo zeinjini yokukhangela ukufumana amagama afanayo). Oku kuthetha ukusebenzisa igama eliphambili ekuqaleni kwezihloko zephepha, ekuqaleni kweenkcazo zeemeta, kwizihloko, ekuqaleni komxholo, nangaphakathi komxholo wephepha (ngaphakathi kweethegi ezomeleleyo okanye ezinesibindi).
Abanye abathengi banobukhulu Igunya (Oko kuthetha ukuba uGoogle ubabeke kwindawo ephezulu ngokusekwe kwimbali yesizinda sabo xa kuthelekiswa namagama ophando abawakhuphisanayo). Abanye abanalo igunya ngenxa yoko kufuneka siqhube izicwangciso ezonyusa igunya labo. Oku kufezekiswa ngokuqinisekisa ukuba zidityanisiwe kwezinye iindawo eziphambili ezikumgangatho olungileyo wamagama aphambili okanye amacandelo oshishino. Oku kuthatha itoni yomsebenzi.
Okokugqibela… siyaqinisekisa ukuba bayaqhubeka nokufumana guquka. Ngamanye amaxesha kufuna ubuchule bokusebenza, ukuyila iminxeba-yokwenza, kunye nokwenza ngokwezifiso amaphepha okufika. Nangona kunjalo, siyazi ukuba inqanaba kunye nokugcwala akuthethi nto ukuba asiqhubeki siqhuba iidola kwishishini elisezantsi.
Ukulandela ngokubonakalayo iibhlog zeendwendwe, ukupapasha ukukhutshwa kweendaba, ukuphawula ngenkuthalo okanye ukuthatha inxaxheba kwiindawo zentlalo ezifanelekileyo kwigama elingundoqo kubalulekile. Kulapho ukukhangela kunye nemidiya yoluntu qala ukugqagqana. Ukunyusa umxholo wakho kuya kuba yinto ephambili… hayi ukuqhuba kuphela ukugcwala kodwa kwanokuqhuba amakhonkco abuyela kwindawo yakho.
Ewe konke oku kuvakala kulula… kodwa ayisiyiyo. Ukuba nezixhobo ezifanelekileyo, ukuqonda indlela yokuphumeza kubahlalutyi kwaye ujonge amaqondo okuguqula, kwaye ube nakho ukucacisa onke amaqhekeza edatha - kubahlalutyi, umphathi wewebhu, uluhlu, amagama aphambili, njl. Abathengi bethu basihlawula ukuba senze loo nto… kwaye sibafundisa nayo kwinkqubo leyo.
Abanye abafana bangaphakathi kunye nabanye abacebisi be-SEO baxoxa ngobuchule bethu ... kodwa kunzima ukuphikisana xa # 1. 🙂
tags: enjini yokukhangela nounSEOeyimfihlo
Ngaba indawo yakho ithi "gcina ngaphandle"?